Wararkii ugu dambeeyey ee xiisadaha Puntland & Somaliland Iyo Dagaal laga cabsi qabo in uu ka dhaco deegaanada…. – Puntlandtimes
Wararkii ugu dambeeyey ee xiisadaha Puntland & Somaliland Iyo Dagaal laga cabsi qabo in uu ka dhaco deegaanada….
BOSASO(P-TIMES)- Waxaa xiisad dagaal ay weli ka taagan tahay deegaano ka tirsan gobolka Sanaag taas oo u dhaxaysa ciidamada Puntland iyo Somaliland.
Xiisadaas ayaa ka dhalatay kadib markii Somaliland ay ciidamo fara badan gaysay deegaanka Yubbe ee bariga gobolka Sanaag, waxaana gaynta ciidamadaasi ay sababtay xaalad cakirnaan ah.
Maalintii shalay ayaa sidoo kale waxa ay ciidamada Somaliland la wareegeen deegaanka Hadaaftimo ee gobolka Sanaag xilli ay halkaasi dadka shacabka ah ay ka dhigayeen banaan baxyo ay uga soo horjeedeen ciidamada Somaliland ee gaadhay deegaano ka tirsan gobolka Sanaag.
Wararka aan helnay ayaa sheegaya in Puntland laftirkeeda ciidamo ay gaysay gobolka Sanaag, waxaana deegaanada Dhahar, Xingalool iyo Badhan hada ku sugan xubno isugu jira wasiiro, xildhibaano iyo masuuliyiin kale oo ka tirsan Puntland.
Dad ku sugan deegaanada bari ee gobolka Sanaag ayaa waxaa ay warbaahinta u sheegeen inay dareemayaan cabsi xoogan oo ku aadan in ay halkaasi kuwada dagaalamaan ciidamada Somaliland iyo Puntland oo kuwada sugan qaybo kamid ah gobolka Sanaag.
Madaxda Puntland iyo Somaliland qaarkood ayaa hawada isku marinaya hadalo xanaf leh oo xiisada sii kicinaya, waxaana madaxweynaha Puntland dhaq dhaqaaqyada ciidamada Somaliland uu ku sheegay duulaan iyo daan daansi ay wado Somaliland isla markaasna waxa uu ku dhawaaqay difaac qaran.
Isimadda dhaqanka gobolka Sanaag ayaa inta badan xooga saaraya baajinta dhiig ku daata gobolka iyo deegaanadooda, waxaana kulamo ka dhacay deegaanka Yubbe ay dhex mareen isimo iyo saraakiisha ciidamada Somaliland kuwaas oo xooga lagu saarayey sidii ay uga bixi lahaayeen deegaanada ay kaga sugan yihiin gobolka Sanaag qaybtiisa Bari walowse la sheegay in ay ka dhaga aday geen arintaasi.
Weli ma cada waxa Puntland uga qorshaysan arintani, waxaana qorshihiisa aanan ku jirin madaxweyne Denni dagaal ka dhan ah Somaliland hasa yeeshee saraakiisha ciidamada Beesha Warsangeli ayaan ku adkaysanaya dagaal ka dhan ah ciidamada Somaliland ee ku sugan deegaanadooda.
Caqli caruur miyaad tahay?
waxaanu saxaafad maaha ee sida isu dhaan .
Ha ka hadlin waxa pl uga diyaarsan difaaca masiirka dadkeeda iyo dalkeeda kuwa xukunka hayaa haday caddowga la shaqaynayaan xilka waanu ka wareejinaynaa shacabka pl iyo xuduudihiisana waan gaaraynaa InshaALLAH .
Ee adigu ma joojin kartaa niicda aad meel waba ku soo qoraysid ee ah caashaa saastiri iyo hebel dagaalamimaaayo oday hebel baa saas qaba walaahay inaaan nina loo joojinayn hartina inaan dagaal loo tilmaamayn hal todabaadna inayan nagu qaadanayn .
Adna haddaan mar dambe ku arko websidkaaga niic dambe waaban kaa xiraynaa .
Ee soo baro saxaafada iyo arima la shaaciyo iyo arimaha kale. Hoy hoy hortaada eeg .bidix midig ula socooo.
Dhafoor qiiq dhaqdhaqaaq looma tilmaamo
Website-kan Gaas baa iska leh wuxuuna ka shaqeeyaa dhibka Puntland.
Hooyaada was maxaad ugu hanjabaysaa dadka
wilka reer galkacyoda says:
aderyalow puntland ma jirte ciyaarta naga daayo cidan punland oo jira aan psf ahyn miya jira somaliland raga wa laga adkada ma taqanaan miya ader naga wareejiye